April 28, 2011 by chowutyee မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 42 Comments	42 Responses
TKL ရေ ပအုန်းရည် မရှိရင် ရှာလကာရည်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်.. လုပ်စားကြည့်ပါ..😀
၀တ်ရည်လက်ယာတွေကတော့ ရှယ်တွေချည်ပဲ။ ပြန်လာမှ ဧည့်သည်လာလုပ်ပြီး ချက်ကျွေးခိုင်းရအုံးမယ်။ မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ဆို အသည်းစွဲပဲ။ ဒီမှာက ပစ္စည်းအစုံ ၀ယ်မရတော့ ။မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်တော့ လုပ်စားပါရဲ့။ ပစ္စည်းမစုံဘူး ဖြစ်နေတာ။ ပအုန်းရည်တို့ ပဲပြုတ်တို့ ၀ယ်မရဘူးလေ။🙂
ကိုသားကြီး တကယ်ကျွေးမှာပါ။ ပအုန်းရည် မရှိလျှင် ရှာလကာရည်ထည့်လို့ရပါတယ်။ ပဲပြုတ်က မထည့်လည်း ရပါပါတယ်။ တချို့ဆို မထည့်ဘူး။ ၀တ်ရည်က ကြိုက်လို့ထည့်တာပါ။ လုပ်စားကြည့်ပါ… တကယ်စားကောင်းတယ်..😛
Ko Nyein ရေ ပအုန်းရည်က ဘိတ်အခေါ်အဝေါ်ပါပဲ… ပအုန်းရည် မရှိရင် ရှာလကာရည်ထည့်လို့ရပါတယ်….🙂
Plz try it!! It is really good!😀
ဟီးဟီး မချော ရန်ကုန်ပြန်လာလည်ရင် လက်တို့လိုက်နော်… တကယ်ချက်ကျွေးမှာ..😛
ဟီးဟီး သိဘူး ညီမလေး…. ရှာလကာရည်ကတော့ ဘယ်နေရာမှာ မဆို ၀ယ်လို့ရပါတယ်…😀
heee ပအုန်းရည်ကို ဓနိရည်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ် ကိုကိုမောင်။ စတုဒိသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်လာရင်သာ တစ်ချက်အီးမေးပို့လိုက်နော်။ တကယ်ချက်ကျွေးမှာ..🙂
yummy…..i ate on mur bd too but wanna eat urs cooking too…treate me🙂
မှုံကြီး ကိုယ်ပြန်လာရင် ချက်ကျွေးမယ်လေ…😛
I tried it n turned out pretty good. thanks ma wut yee. posted at my FB page🙂
အဲဒါလေး ဒီနေ့ ဈေးသွားရင်းနဲ့ တွေ့လို့ ဘိတ်ကတ်ကြေးကိုက် လုပ်စားချင်တာနဲ့ ၀ယ်လာတာ။ ၀တ်ရည်ရဲ့ နည်းနဲ့ မနက်ဖြန်ကျရင် လုပ်စားမယ်။ လုပ်နည်းအတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။🙂
wutt yee yay, ama FB mhar friend request sent htar tar accept loat pay par own… realcartoon so tae name nae… wutt yee yae food tway myin pee tha baw kya nay tar… yoke lay ka lae chaw,achatapyoke ka lae taw🙂
ပအုန်းရည်ကို ဓနိရည်လို့လည်း ခေါ်တာပါ။ ဓနိရည်ရှာမရရင် ရှာလကာရည် အစားထည့်လို့ရပါတယ်..😀
hote hae par!!🙂
Wutyee can’t come online in these days because of Internet slowness so wut hmone will answer instead of wut yee and she mean “အကြမ်းမှုန့် လေးစိတ်ကွဲကိုပြောတာ” par shin…🙂
Thanks Yadanar.. I prepare for4plp for that dish!🙂
မ၀တ်ရည်ရဲ့ နည်းနဲ့ ဒီနေ့ မြိတ်ကပ်ကြေးကိုက် လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ကောင်းတယ် မ။ ကျေးဇူးနော်။ ဒီလို ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ တင်ပေးတာ။ နောက်လည်း မ၀တ်ရည်ရေးတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ချက်စားကြည့်ဦးမယ်း🙂
၀တ်ရည်လည်း မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက် သိပ်ကြိုက်တာ… တခြားဟင်းလေးတွေလည်း စမ်းကြည့်ပါအုန်း ညီမ..🙂